" ကိုင်းကိုလဲဖြတ် အမြစ်ကိုလဲသတ်ပါ " | dawnmanhon
" ကိုင်းကိုလဲဖြတ် အမြစ်ကိုလဲသတ်ပါ "
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေဆဲ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးကြီးနေလို့ တိုက်နေရတယ်ဆိုတာ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းမှ ပြည်သူတွေကျေနပ်လက်ခံအောင်ရှင်းမပြနိုင်ကြပါဘူး။ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေး၊ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သုံးစွဲဖို့ ဘဏ္ဍာငွေကြေးချို့ တဲ့နေလို့ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေရချိန်မှာ ရှင်နည်းရာ အဂ္ဂလူထွက်ဆိုသလို နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေကြေးတွေကို တိုင်းရင်းသားညီးအကိုအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ရတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေ၊ ထိုးစစ်တွေမှာ လေယာဉ်တွေ၊ တင့်ကားတွေသုံးပြီးဖြုန်းတီးပစ်နေတာဟာ အလွန်လွဲချော်မှု့ကြီးဖြစ်တယ်။
မိဘပြည်သူတွေက လူသတ်စစ်ပွဲတွေရပ်ကြပါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ကျိုးစားကြပါလို့ အထပ်ထပ်မေတ္တာရပ်ခံနေတဲ့ကြားက ပြည်သူပိုင် ဘဏ္ဍာငွေကြေးတွေကို ခွင့်ပြုချက်မတောင်း၊ အတည်ပြုချက်မယူ၊ ဖြေရှင်းချက်မပေးဘဲ စစ်ပွဲတွေအရှိန်မြှင့်နေတာဟာ ပြည်သူကိုစော်ကားနေတဲ့သဘောသက်ရောက်ပါတယ်။ ငါတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် တိုင်းပြည်ကာကွယ်နေရတာဆိုတဲ့ မဲပြာပုဆိုးအကြောင်းပြချက်နဲ့ ဘယ်သူ့ အမိန့် ကိုမှာနာခံစရာမလိုဘူးဆိုတာ ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကစလို့ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်စရိုက်သဘာဝပါဘဲ။
အခုဆိုရင် မြစ်ကြီးနား၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးများမှာတော့ ထိုးစစ်ဆန့် ကျင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုပွဲတွေကျင်းပသွားခဲ့ပြီးပါပြီ။ တကယ်တော့ ဒီလိုမျိုး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လူထုဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မှု့တွေကို တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်မြို့ တော်တိုင်းမှာ ထုတ်ဖေါ်ကျင်းပသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်တိုင်းမှာ စစ်မဖြစ်နေလို့ ဆိုပြီး မဆိုင်သလိုထိုင်မနေသင့်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လို့ လဲဆိုတော့ စစ်ပွဲတွေ၊ ထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဟန့် အတားပြုနေကြတာပါ။ ပြည်တွင်းစစ်မငြိမ်းနိုင်သတ်နိုင်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးမရရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ပါဘူး။ တရားဥပဒေမစိုးမိုးရင် နိုင်ငံသားအားလုံးဘ၀မလုံခြုံနိုင်သလို တိုင်းပြည်ရဲ့ခြံစည်းရိုးလည်းမလုံပါဘူး၊ တခါးပေါက်အားလုံးကိုလည်း လုံခြုံအောင်ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘုး။ အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးဟာ စစ်မဖြစ်တဲ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေက နိုင်ငံသားတွေပါ မလုံခြုံတဲ့ဘ၀တွေ ခံစားရစေမှာဖြစ်သလို ဆင်းရဲဒုက္ခအစုစုကို ဆက်စပ်ခံစားကြရတာ မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ တောင်းဆိုရမှာ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။
လတ်တလော ထင်ရှားတဲ့သာဓကအနေနဲ့ ကတော့ မောင်တောမြို့နယ်နဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းများ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါဘဲ။ ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်ဥပဒေနှင့်အညီတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ညွှန်ကြားထားကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှာ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်၊ ညဦးပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကို အင်တာနက်သတင်းပေါ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့အကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့ပြောသင့်ပြောအပ်တဲ့စကားကို တည်တည်ကြည်ကြည် ဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အမျိုးချစ်လွန်နေသူတွေ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်နေသူတွေ၊ NLD ပါတီဦးဆောင်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရကို အပုပ်ချတိုက်ခိုက်လိုတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ သွေးဆူပြီး မခံချင်စိတ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ တမင်ရည်ရွယ်လို့ ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြမ်းဖက်တာကို အကြမ်းဖက်နည်းနဲ့ မဆင်မခြင်တုံ့ ပြန်ဖို့ခြေထိုးလှုံ့ဆော်နေကြတာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပလူပျံနေတာပါဘဲ။ ဒါဟာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးခက်ခဲစေပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှု့တွေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေကိုပါ ကူးစက် ဦးတည်သွားစေနိုင်တယ်။
နိုင်ငံတကာမိသားစုအမြင်တွေမှာလည်း လူနည်းစုအပေါ် လူများစုက ဝိုင်းအနိုင်ကျင့်နေသယောင်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု့တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်ကို အဟန့်အတားပြုနေတဲ့သူတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။
ဒီဘင်ဂါလီ အကြမ်းဖက်မှု့ကို လှေကြုံစီးပြီး ပြည်သူတင်မြောက်တဲ့အစိုးရကို အထင်လွဲအောင် မြန်မာနိုင်ငံ ထဲက တခြားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပါ ရောယောင်မုန်းတီးအောင် ခြေထိုးလှုံ့ဆော်နေလို့ အမုန်းတရားကို တိုက်ရိုက်ရော သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရော ဖြန့်ဝေဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်နေတာပါဘဲ။
တရားဥပဒေမစိုးမိုးခြင်းဆိုတဲ့ ရေသောက်မြစ်မကြီးကိုအခြေခံထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရွက်တဖားဖားနဲ့ ကြီးထွားနေတဲ့ ပြဿနာအဆိပ်ပင်ကြီးအောက်မှာ ပြည်တွင်းစစ်၊ ဘင်ဂါလီခိုးဝင်၊ အကြမ်းဖက်မှု့၊ အနောက် စည်းရိုးမလုံခြုံမှု့၊ အရှေ့တံခါးမလုံမှု့၊ အဂတိတရားလိုက်စားမှု့ အစရှိတဲ့ ပြသနာအကိုင်းအခက်တွေ အားလုံးကို ခုတ်ဖြတ်ပစ်ယုံနဲ့ ပြဿနာအဆိပ်ပင်ကြီးကို မရှင်းလင်းနိုင်ပါဘူး။ ခုတ်ပစ်လည်း အတက်တွေ အညွှန့်အညောက်တွေထွက်လာမှာပါဘဲ။ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြစ်လှန်ရမှာပါ။ ခုတ်သင့်တဲ့ကိုင်းကိုခုတ် တူးသင့်တာကိုတူးပြီး ပြည်သူနဲ့အစိုးရ ဟန်ချက်ညီညီအလုပ်လုပ်ရင် ဘင်ဂါလီရန်မကလို့စစ်အာဏာရှင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာရန်ဖြစ်ဖြစ် စနစ်တကျတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။
အခုဖြစ်နေတာက တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင် မလုပ်နိုင်လို့ အကြမ်းဖက်မှု့တွေများပြားနေရသလို့ အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှု့တွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် မနှိမ်နင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါ။ ပြည်သူတွေ အသိတရားရှိရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့မရှိတဲ့ ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆို အောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
ညီအကိုချင်းသတ်ခိုင်းတဲ့စစ်ကို စစ်မိန့်ပေးနေတာတွေရပ်ပါ။ တပ်မတော်စစ်သားတွေသေသေ KIA တပ်သားတွေသေသေ အားလုံး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ။ စစ်ဖြစ်တဲ့ဒေသက အကြမ်းဖက်ခံ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း မြန်မာပြည်သားတွေ၊ ကချင်တွေသေသေ မြန်မာစစ်သားသေသေ ရခိုင်တွေသေသေ ဒါဟာ နိုင်ငံအတွက်ဆုံးရှုံးမှု့။ စစ်ဖြစ်နေလို့ ခံရတာကို ထည့်မတွက်ကြေး၊ လစ်လျူရှု့ရမယ် ဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှု့ကို အားပေးရာရောက်သလို ဖိနှိပ်သူဖက်က ရပ်တည်ရာရောက်တယ်။
တိရိစ္ဆာန်တောင်သူ့ အိမ်ဖျက်တာမကြိုက်ဘူး၊ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ အိုးအိမ်တွေ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအောက်မှာ၊ အကြမ်းဖက်မှု့တွေအောက်မှာ အဖျက်အဆီးခံနေရတာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ နီးပါးရှိနေပြီဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။
တချို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဆို အဖျက်အဆီးခံရတာ တကြိမ်တောင်မဟုတ်ပါဘူး အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ အဖျက်ခံရတဲ့အပြင် အခုဆို ကိုယ်မွေးရပ်မြေမှာကိုယ်နေထိုင်ရှင်သန်ခွင့်တောင်မရရှာကြပါဘူး။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ နီးပါးမှာ အပြစ်မဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်သေပြီး ပြီထင်ပါသလဲ ... ? မြန်မာနိုင်ငံသား ဘယ်နှစ်ယောက် ခြေပြတ်လက်ပြတ်ဖြစ်ပြီးဘ၀ဆုံး လူညွှန့် တုံးဖြစ်ခဲ့ ရပြီးပြီ ထင်ပါသလဲ ? တိုင်းရင်းသူအမငယ်၊ နှမငယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး ပန်းကောင်း အညွှန့် ချိုးခံခဲ့ရပြီးပြီ ထင်ပါသလဲ? အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရင်ထဲက ဒေါသမီးတောက်တွေ၊နာကျည်းမှု့တွေ ကို ငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရအောင်ယူပြီး ကုစားပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။
ဖိနှိပ်သူ၊ အနိုင်ကျင့်သူ၊ အကြမ်းဖက်သူဆိုတာ အာဏာပိုင်၊ လုပ်ငန်းရှင် ဘင်ဂါလီ၊ လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ စသည်ဖြင့် ဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်သူဆိုရင် ပြည်သူပြည်သားအားလုံးက ဆန့်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ အကြမ်းဖက်မှု့၊ အနိုင်ကျင့်မှု့၊ အကျင့်ပျက်ချစားမှု့၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု့၊ အနိဌာရုံအဝဝ ပြဿနာပေါင်းစုံအမွှမွှအားလုံးရဲ့မူလဘူတအရင်းခံအကြောင်းတရားဟာအဂတိတရား ၄ ပါး ကို အခြေခံရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြသနာအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ အခွင့်ထူးခံ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မှသာ ပြဿနာသောင်းခြောက်ထောင်ကိုထိထိရောက်ရောက် ချေမှုန်း နိုင်မှာပါ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အညီ ပြင်ဆင်နိုင်ရင်... ငြိမ်းချမ်းရေုးမြန်မြန်ရမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရရင် နိုင်ငံသားအားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လက်နက်အားကိုး ဗိုလ်ကျမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု့၊ ဘင်ဂါလီကိစ္စ၊ အနောက်တံခါးမလုံခြုံမှု့၊ အရှေ့ တံခါး မလုံခြုံမှု့ စတဲ့ ရှိရှိသမျှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြသနာအဝဝကို စနစ်တကျ ထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ ပင်မအရင်းခံအကြောင်းတရားကို (Root Cause) ရှင်းနိုင်ရင် အကိုင်းအခက်ပြသနာတွေ အလွယ်တကူရှင်း လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ရေးရရင် တရားဥပဒေမစိုးမိုးခြင်းရေသောက်မြစ်မကြီးဟာ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆို တဲ့ ဖုန်းဆိုးမြေကြီးထဲက ထွက်လာတာပါဘဲ။ အဲ့ဒီဖုန်းဆိုးမြေကြီးကို ရွှေသီးတဲ့မြေကြီးဖြစ်အောင် ပြုပြင်နိုင် မယ်ဆိုရင် အဆိပ်ပင်ပေါက်လာရင်တောင် မသန်စွမ်းနိုင်သလို အလွယ်တကူတူးထုတ်ရှင်းပစ်လို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အကြမ်းဖက်မှု့၊ ဗိုလ်ကျမှု့၊ မတရားမှု့တွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာမှာ ကိုင်းကိုလည်းဖြတ်၊ အမြစ်ကိုလည်းသတ်နိုင်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်မှု့ အဖြေရှာတတ်သူတွေ ကိုရှေ့တန်းတင်အားထားပြီး ဟိုအကိုင်းလေးဖြတ်၊ ဒီအကိုင်းလေးချိုင်ပြသာလုပ်ပေမဲ့ ရေသောက် မြစ်မကြီးကို မတူးထုတ်ရင်တော့ ပြဿနာအညွှန့် အညှောင့်တွေ အကိုင်းအခက်တွေပြန်ပြန်ထွက်ပြီး မဆုံးနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်သံသရာကြီးထဲမှာ တ၀ဲလည်လည်နစ်မွန်းနေရတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့်တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကိုပြင်ဆင်လို့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှု့၊ ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှု့၊ အကြမ်းဖက်မှု့ ကိုင်းတွေကိုလည်းဖြတ် အမြစ်ကိုလည်းသတ်ပါလို့ နိုင်ငံသားတိုင်းကို အလေးအနက်တိုက်တွန်းပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်
dawnmanhon: " ကိုင်းကိုလဲဖြတ် အမြစ်ကိုလဲသတ်ပါ "